सुन्दरता अनुहारमा हुँदैन र शरीरमा खोजेर पनि हुँदैन : सञ्चिता लुईंटेल « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
जनकपुर साहित्य महोत्सवको दोस्रो दिनको तेस्रो सेसन ‘समाज : सौन्दर्य भित्र र सौन्दर्य बाहिर’ मा वक्ताको रुपमा उपस्थित भएकी अभिनेत्री सञ्चिता लुईंटेल गम्भीर र भावुक मुद्रामा देखिएकी थिइन् । कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि श्रीमानबाट एसिड आक्रमणमा परेर आधा शरीर जलेकी र दाहिने आँखा गुमाएकी आरती साहको पीडा सुन्दा उनी स्तब्ध भएकी थिइन् ।
३ वर्षकी छोरी च्यापेर स्टेज चढेकी आरतीले एसिड प्रहार हुनुभन्दा पहिलाको तस्विर देखाउँदै ‘यो आरती मरिसक्यो, म नयाँ आरती हो र अब यो फोटोमा माला चढाएर राख्छु’ भन्दा सञ्चिता अवाक भइन् । उनको यो आत्मविश्वास देखेपछि सञ्चिताले भनिन्, ‘अनुहारमा कुरुपता होला । कुरुप बनाइएका सुन्दरता होलान् । तर असली सुन्दरता भित्र हुन्छ । जुन महसुस मात्रै गर्न सकिन्छ ।’
समाजले स्त्रीको चरित्र दैव नजाने भन्ने गरेको तर पुरुषको चरित्र कसले जान्ने ? भनेर पनि उनले प्रश्न गरेकी छन् । महिला र पुरुष दुईथरका पांग्रा भन्ने गरिएको भए पनि त्यो शब्दमा मात्र सीमित रहेको उनको कथन छ । ‘एउटा रथ सरर गुड्ने, अर्को रथ चाहिँ धकेल्दै गुडाउनु पर्ने यो समाजमा ? अब यो विषयमा पनि आवाज उठाएनौं भने हामी धेरै पछाडि रहन्छौं,’ सञ्चिताले भनिन् ।
आरतीको तीन वर्षे छोरीसँग गरेको कुराकानी सुनाउँदै उनले थपिन्, ‘मेरो घरमा पनि छोरी छ । मैले आरतीको छोरीलाई तिमी र तिम्रो ममीलाई पीडा दिने व्यक्तिलाई के गर्न चाहन्छौ भनेर सोध्दा ‘काटिदिन्छु’ भनिन् । एउटा तीन वर्षको बच्चाले आफ्नो पिताको नाम लिएर ‘काटिदिन्छु’ भन्दैछ भने सोच्नुस् हाम्रो समाज कता गइरहेको छ ? अबका बच्चाले आफ्ना पितालाई कुन रुपमा हेर्ने ?’
एसिड आक्रमणबाट जलेका शरीर र आला घाउहरु देख्दा आफ्नो मन भतभति पोल्ने गरेको उनी सुनाउँछिन् । सुन्दरता अनुहारलाई मान्ने मान्छेको सोंच रहेको पनि उनले बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘सुन्दरता अनुहारमा हुँदैन र शरीरमा खोजेर पनि हुँदैन । सुन्दरता कहाँ अनुहार हो र ? त्यो त मान्छेको सोंच र हेर्ने नजरिया हो । मानिसको सुन्दरता लुकेको हुन्छ, जुन बाहिर देखिँदैन ।’
ऋचा शर्मा आमा बन्दै, सजीवनको रुख पनि हुर्काउँदै
अभिनेत्री तथा रियालिटी शो ‘कमेडी च्याम्पियन’की निर्णायक ऋचा शर्मा आमा बन्ने भएकी छन् । यो
असार २५ मा ‘दुष्प्रयास’ रिलीज हुने
काठमाडौं। महिला हिंसा, हत्या, अपहरणलगायतका समाजमा घटिरहेका आपराधिक गतिविधिविरुद्द आवाज उठाइएको भनिएको नेपाली चलचित्र ‘दुष्प्रयास’ले
गरिमाको ‘बेबी बम्प’
बेल्जियम बस्दै आएकी नेपाली नायिका गरिमा पन्तले ‘बेबी बम्प’ फोटो सार्वजनिक गरेकी छन् । वि.सं.
‘डाँडाको बरपीपल’मा सलोन र रुबिनाको जोडी
नयाँ चलचित्र ‘डाँडाको बरपीपल’को छायांकन शुरु हुने भएको छ । बुढासुब्बा ओरिजिनलको प्रस्तुतिमा बन्न लागेको
वेब सिरिज ‘ईओजी’को पोस्टर रिलीज
नेपाली वेब सिरिज ‘ईओजी (Errors of God)’ को फर्स्ट लुक पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ ।